मधेश भर्सेस मिथिला : प्रदेश- २ को नाम 'मध्य मधेश' राखौं
समान्य अर्थमा भने हो भने कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई जे शब्द दिएर बोलाउन थालिन्छ त्यो उक्त वस्तुको नाम भनेर चिनाउन थालिन्छ । नामको आफ्नै छुट्टै महत्त्व हुन्छ, दुनियाँमा परिचित हुनका लागि । राजनीतिक संसारमा यो विषय जटिलतम् हुन्छ । राजनीतिलाई जटिल बनाएर प्रस्तुत गरिनु मुल कारण हो । अहिले नेपालको प्रदेश– २ को नामाकरण ले चर्चा पाएको छ । जनक प्रदेश, बिदेह, सीताजस्ता नामहरू प्रदेश–२ को चिया पसलहरूमा चर्चाको विषय बनेको छ । र प्रदेश–२ को राजनीतिक बजारमा चर्चा पाएको छ ‘मधेश र मिथिला’ले, मुलतः ।
प्रदेश– २ को नीति आयोगका अध्यक्ष डा. हरिवंश झाको नेतृत्वमा प्रदेश नामाकरणको टुंगो लगाउने गरी तीन सदस्सीय समिति समेत गठन गरिएको छ । राजनीतिक आवरणमा गठित समितिले केही ठोस एवं मान्य सुझाव दिनै सक्दैन भनेर भन्नु पूर्ण सत्य कदापी हुन सक्दैन । तर नेपालको इतिहासमा समिति गठन गर्नु भनेको चर्केको मुद्दालाई थामथुम पार्नलाई गरिन्छ, हामीसँगै यथेष्ठ नजिरहरू छन् । समितिको प्रतिवेदन पढ्न केही समय कुर्नै पर्ला । यद्यपि अहिलेको सन्दर्भमा मिथिला भर्सेस मधेशको नालीबेली छान्नुको उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश नामाकरण गर्दा मधेश शब्दलाई निषेध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरू यसमा पनि चुनावी राजनीति बाहेक अरु केही देख्न असफल जस्तो देखिएका छन् । उनीहरूलाई लाग्दो हो यदि प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश वा प्रभागकारी रूपमा मधेश शब्दले स्थान पायो भने आम मधेशी जनताको भावनामाथि केही हदसम्म मधेशवादी दलले विजय पाउलान् र आउँदो चुनाव मा यसको फाइदा मधेशवादीले उठाइहाल्लान कि ? जबकि मधेशवादी दल आफैं दलदलमा फसेका छन् । मिथिला प्रदेश र मैथिली भाषा प्रदेश २ को हुनुपर्छ भने अडान कांग्रेस र नेकपाले गर्दै आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका वर्तमान नेताहरूलाई बुझिनसक्नु छ । बीपी कोइरालाको नाममा राजनीति गर्ने यी कनिष्ट आत्माहरू मधेश शब्दको उच्चारण गर्नबाट निषेध गर्न खोज्छन् । तर बीपी धनकुटा जेलमा रहेका बेला उनी र उनका साथीलाई पहाडै पहाडको बाटो लगिएको थियो र ‘मधेशको बाटो’ लगेनन् भने कुराको चर्चा उनको आत्मवृतान्त –पृष्ठ ४४) मा पढ्न सकिन्छ ।
उनीहरूको यी तर्क आउनासाथ बारा पर्साका नागरिकमाथि के बित्छ भन्ने कुराको हेक्का समेत राख्दैनन्, उनीहरू । अर्का थरी दलिलकर्ता ती हुन् जसलाई लागिरहेको छ कि उनी स्वयं मिथिला संस्कृतिका एकल संरक्षक हुन् । र अरुलाई भने मिथिला शब्दसँग घृणा छ । जबकि यी अभियन्ताहरूलाई मिथिलाको रट लगाएबापत दाम आएन भने ‘काहे का मिथिला’ ? भन्न पनि बेर लगाउने छैनन् । प्रदेशको नामाकरण मिथिला गरेर मिथिला संस्कृतिको संरक्षण देख्ने यस्ता महान व्यापारी आत्माले मिथिलाको इतिहास संरक्षण गर्नका लागि प्रदेश मात्र होइन राष्ट्रिय स्तरमा समेत मिथिला संग्राहलय निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ । मिथिला सभ्यतासँग सम्बन्धित विभिन्न आयामहरूलाई प्रदेशले बनाउने शिक्षा नीतिअन्तर्गत समाविष्ट गराई विद्यार्थीलाई पढाउने हो भने आउने पुस्ताले समेत गौरवका साथ मिथिला संस्कारलाई स्मरण गरिरहने छ ।
प्रदेश २ लाई फगत मधेशको रूपमा चित्रित गर्न खोजिँदै छ, साशक वर्गबाट र ठूला भनाउँदा दलहरूबाट जसले अहिले पनि संघीयतालाई नरुचाएको अवस्था छ ।
अरु हुन् राजपा–नेपाल र संसफो–नेपालका मसिहाहरू जो अर्थहीन दम्भको दुनियामा हिँडिरहेका छन् । मधेश आन्दोलनले संघीयता ल्याएको हो यो देशमा र आफूहरू त्यसको प्रणेता हुँ भने भावनामा पूर्व र पश्चिममा रहेका मधेशीहरूको भावनामाथि कुठाराघात गरिरहेका छन् । समग्र मधेशबाट समग्र मधेश दुई प्रदेशको नारामा झरेका यी नेताहरूकै अबुझ र अपरिपक्व राजनीतिका कारण मधेश खण्डित भएको छ । प्रदेश २ लाई फगत मधेशको रूपमा चित्रित गर्न खोजिँदै छ, साशक वर्गबाट र ठूला भनाउँदा दलहरूबाट जसले अहिले पनि संघीयतालाई नरुचाएको अवस्था छ । जानकारीअनुसार प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश राख्ने भावनामा ओतप्रोत छन् मधेशी नेताहरू । शायद यो उनीहरूले गरेको खण्डित आन्दोलनको देन होला ।
विदितै छ नेपालमा संघीयताको जन्म मधेश आन्दोलनले गराएको हो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म बसोबास गर्ने मधेशी एवं सिमान्तकृत वर्गले गरेको संघर्षको ताजा र गर्वपूर्ण इतिहास छ । अहिले अस्तित्वमा देखिएको प्रदेशको सिमाङ्कनबाट मधेश आन्दोलनका सच्चा सिपाहीहरूमा असन्तुस्टि व्याप्त छ । राजनीतिक मारका कारण उनीहरूमा उकुसमुकुस छ । समग्र मधेश दुई प्रदेशको भावनालाई कदर गर्नका निमित्त प्रदेशको नामाकणले भावनात्मक तर गहन योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ । प्रदेश–२ को नाम ‘मध्य मधेश’ राख्ने हो भने राजनीतिक एवं पहिचानका हिसाबले सार्थक हुनेछ । ‘मध्य’ शब्दको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । यसले पश्चिम एवं पूर्वी मधेशका बसोबासीलाई संघर्ष जीवित राख्न प्रेरित गर्नेछ । एउटा अर्थपूर्ण सपना देख्ने आधार दिनेछ कि प्रदेश– २ सँग समन्वय गरी राख्ने हो भने राजनीतिक दुष्टभावनाले कोरिएको प्रादेशिक सिमाङ्कनलाई परिवर्तन गर्न सकिने छ ।
भावनाको सिंढी चढेर अधिकार खोज्नेहरूले कहिले अधिकार नपाउँदा रहेछन् । लाडाईं राजनीतिक रूपले नै गर्नुपर्छ । मिथिलाको आफ्नै बेछाट इतिहास र गौरव छ । मधेशको इतिहास पनि आफ्नै खालको छ । राजनीतिक परिवर्तन मधेशले ल्याएको छ । नेपालको राजनीतिमा मधेशी/सीमान्तकृतहरूको पकड नभए पनि देशको राजनीतिक लगाम मधेशकै छ । अहिलेको प्रदेश– २ ले त झन् देशको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने नै छ । त्यसैले प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेश’ राख्ने चेतना प्रदेश– २ सरकारलाई आओस् ।